Waraaqaha loogu talagalay Instagram si ay u nuquliyaan oo u dhajiyaan ➡️ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
March 15, 2021 October 2, 2019 by Akhristayaasha Shabakada
1 Ku qor qoraalka aad rabto santuuqa.
2 Xulo font ama ereyada aad jeceshahay.
3 Nuqul ka sameyso oo ku dheji bartaada Instagram
Xilligan Instagram waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee leh isdhexgal badan maalinba maalinta ka dambeysa, dad aad u tiro badan ayaa adeegsanaya barnaamijkan si ay ula xiriiraan dad badan oo ku nool dhammaan qaybaha adduunka.
Taasi waa sababta ay caadi u noqotay in la doonayo in la muujiyo wax ka badan malaayiin 800 oo isticmaaleyaal ah waana lagama maarmaan in la ogaado in mid fudud sawir Kuma filna. Waa lagama maarmaan in la helo xirmo dhameystiran oo ah: sawir + sharraxaad.
Maaddaama sharraxaadda ay aad muhiim ugu tahay naqshadayntu waa inay ahaataa mid gebi ahaanba khaas ah, si kadis ah mid ka mid ah qaababka loo beddelo naqshadda ayaa la adeegsanayaa xarfaha asalka ah oo si gaar ah u taaban doona astaantaada. Marka og sida ugu fiican Erayada 'Instagram' si ay u nuqulaan oo u dhejiso.
Waa maxay ujeedadu in la beddelo ilaha?
Ilaha Instagram Waxay kuu oggolaanayaan inaad yeelato noocyo badan oo kala duwan oo aad ka tagto heerka ay Instagram ku jirto mid kasta oo ka mid ah walxaha ay ka kooban tahay. Horeba sheekooyinka Instagram waxay leeyihiin howsha badalida fontka si kastaba ha noqotee maqaalada caadiga ah malaha shaqadan.
Runtii ma muhiim baa in la beddelo font noocan ah?
In ay tahay wax si adag lagama maarmaan u ahayn ma aha, si kastaba ha noqotee waa inaad tixgelisaa inay taasi kaa caawin karto inaad sare u qaaddo tirada aragtida iyo falcelinta aad ku leedahay mid kasta oo ka mid ah qoraalladaada. Waqtiga xaadirka ah waxaa jira tiro badan oo dad ah oo adeegsada qalabyada noocaan ah si ay u muujiyaan mid kasta oo ka mid ah daabacadooda.
Waraaqo noocee ah ayaa jira?
Koontada 'Instagram' dhowr beddelayaal ayaa kaa caawin kara beddelka xarafka arjiga, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad kala soo baxdo mid ka mid ah beddelayaashan, dhig magaca warqadda aad ugu jeceshahay, qor weedha si aad u dhammayso adoo koobiyeya oo ku dhajinaya qoraalka daabacaadda.
Kuwani waa noocyada waraaqaha ee aad isticmaali karto:
Qeybta madow 【A】 【E】 【I】 【O】 【U】
Jacaylka L ♥ O ♥ V ♥ E ♥
Qaybta cad 『A』 『E』 『I』 『O』 『U』
Xumbada madow 🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩
Fagaaraha madow 🅲🅳🅴🅵🅶🅷🅸🅹🅺🅻🅼🅽🆀🆁🆂🆃🆄🆅🆆🆇🆈🆉
Baadho ur a͏b͏c͏d͏e͏f͏g͏h͏i͏j͏k͏l͏m͏n͏o͏p͏q͏r͏s͏t͏u͏v͏w͏x͏y͏z
Italic Bold 𝘼𝘽𝘾𝘿𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕
Lacagta ₳ ฿ ₵ ĐɆ ₣ ₲ ⱧłJ ₭ Ⱡ ₥ ₦ Ø Ɽ QⱤ ₴ ₮ ɄV ₩ ӾɎⱫ
Qaab fancy 1 αвc∂εғgнι נ кℓмησρqяsтυvωxүz
Qoraalka Gacanta 1 𝒜𝐵𝒞𝒟𝐸𝐹𝒢𝐻𝐼𝒥𝒦𝐿𝑀𝒩𝒪𝒫𝒬𝑅𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵
Rusus АБCДЄFGHЇJКГѪЙѲPФЯ $ TЦѴШЖЧЗ
Koofiyadaha yaryar ᴀʙᴄᴅᴇғɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ
Sixiroole ǟɮƈɖɛʄɢɦɨʝӄʟʍ ռօքզʀֆ ȶʊʋ ա Ӽʏʐ
Gaarka ah ᗩᗷᑕᗪ EᖴGᕼI ᒍ K ᒪᗰᑎ O ᑭᑫᖇᔕ T ᑌᐯᗯ᙭ ​​Yᘔ
Astaamaha ꍏ ♭ ☾◗ € Ϝ❡♄♗ ♪ ϰ↳♔ ♫ ♫
Khad hoosta ka xariiqay A̲B̲C̲D̲E̲F̲G̲H̲I̲J̲K̲L̲M̲N̲O̲P̲Q̲R̲S̲T̲U̲V̲W̲X̲Y̲Z̲
Hoos udhaca ɐqɔpǝɟƃɥıɾʞlɯuodbɹsʇnʌʍxʎz
Maxay yihiin waraaqaha beddelaadda u jira Instagram?
Coolsymbol: waxay leedahay xNUMX ilo kala duwan oo loogu talagalay oraahda aad rabto.
Sprezzkeyboard: Waxay leedahay codsi iyo tifaftire shabakadeed, waxay leedahay ilo ka badan 50 ilo kala duwan.
Lingojam: Isagu waa tifaftiraha ugu fudud ee dhammaan wuxuuna leeyahay ilo badan oo loogu talagalay Instagram.
Waxa ugu fiican ayaa ah in saddexdaas beddelaya ay gebi ahaanba xor yihiin.
Waraaqaha loogu talagalay qaab-dhismeedka laba laab
Xarfaha xargaha ee loo yaqaan 'instagram'
ℬ ℋ ℎ ℐ ℴ ℱ ℰ ℯ ℒ ℒ ℊ ℘ ℛ
Waraaqaha ayaa lagu duuduubay goob goob
Waraaqaha kala go'ida
Xarfaha warqadda leh
Waraaqaha lafaha ah
Xarfaha hoosta ka xariiqay ee barta Instagram
Lambaradu waxay ku duudduubnaa goobo
Wareegyo mugdi ah ayaa duubnaa lambarro
Codsiyada kale ee aad isticmaali karto
Haddii sabab kasta ha noqotee ay codsiyada kale kuu adeegin gabi ahaanba, waxaan kaaga tageynaa tusaalooyin kale oo ah codsiyada aad u sii wadi karto inaad u adeegsato inaad ku abuurto dhammaan noocyada ilo ee aad codsan karto mid kasta oo ka mid ah daabacadahaaga, taariikh nololeedkaaga ama faalladaada.
Qaar ka mid ah barnaamijyadan waxay leeyihiin astaamo bilaash ah iyo qaabab kale oo mushahar lagu bixiyo, sidaa darteed intaadan si buuxda u bixin, waxaa ugu wanaagsan inaad tijaabiso nooca bilaashka ah oo aad hubiso inay runtii tahay arjiga ku habboon labada qoraalba iyo falcelinta aad kari karto. raaco kuwa raacsan:
Waa barnaamij sameyn kara isbedello dhowr ah ee taariikhda nololeed ee Instagram, waxay leedahay wax ka badan xuruufta 100 si ay u beddelaan qoraalka iyo xitaa leh saldhig yar oo sawirro ah oo lagu sameeyay astaamo taas oo aad baddali karto oo aad ku dari karto jeceshahay qoraalladaada.
Tani waa codsi runtii wanaagsan, waxay leedahay mid ka mid ah qiimeynta ugu wanaagsan ee App Store waxayna leedahay in ka badan 30 gebi ahaanba bilaashka ah. Waxay kaloo leedahay tiro waraaqo ah oo badan oo la bixiyo oo ansax ku ah shabakad bulsho oo kasta.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso xirmooyin loogu talagalay Instagram.
Codsigani wuxuu aad ugu egyahay labadii hore. Si kastaba ha noqotee, tani waxay leedahay faa iido weyn taasna waa in barnaamijkani leeyahay tiro badan oo ereyo gebi ahaanba bilaash ah. Fonts waa midka ugu isticmaalka badan tan iyo markii uu leeyahay mid ka mid ah noocyada ugu isticmaalka badan ee 'Instagram' oo xarfaha loo rogo.
Waxaan rajeynaynaa in dhammaan waraaqahaan loogu talagalay Instagram si loo duubo oo loo dhejiyo waxay kaa caawin doonaan inaad hagaajiso naqshadda mid kasta oo ka mid ah sharraxaadda ku jira xisaabtaada 'Intagram'. Xusuusnow in beddelayaashani kaliya shaqeeyaan haddii aad rabto inaad beddesho weedho ama qoraal kasta, shaqada kama ay fulinayaan codsiga laakiin waa inaad nuqul ka dhigtaa oo aad dhejisaa qoraalka wax laga beddelay.
Taasi waa sababta ugu wanaagsan in la isku dayo qalab kasta oo aan soo bandhignay oo aad noo sheegto sida ay mid kastaaba kuula shaqeyneysay iyo tan ugu fiican ee kuu shaqaysay.
1 Waa maxay ujeedadu in la beddelo ilaha?
2 Runtii ma muhiim baa in la beddelo font noocan ah?
3 Waraaqo noocee ah ayaa jira?
4 Maxay yihiin waraaqaha beddelaadda u jira Instagram?
4.1 Waraaqaha loogu talagalay qaab-dhismeedka laba laab
4.2 Xarfaha xargaha ee loo yaqaan 'instagram'
4.3 Waraaqaha ayaa lagu duuduubay goob goob
4.4 Waraaqaha kala go'ida
4.5 Xarfaha warqadda leh
4.6 Waraaqaha lafaha ah
4.7 Xarfaha hoosta ka xariiqay ee barta Instagram
4.8 Lambaradu waxay ku duudduubnaa goobo
4.9 Wareegyo mugdi ah ayaa duubnaa lambarro
4.10 Lambarada yaryar
5 Codsiyada kale ee aad isticmaali karto
5.2 Foon foos
Tilmaamaha IGTV: Waxkasta oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Barnaamjiyada Fiidiyowga Cusub ee Instagram
Baro sida loo isticmaalo albumka sawir ee 'Instagram'